Ukuhlaselwa kweNew Zealand: ukusekwa ngokuchanekileyo kokucandwa komhlaba jikelele, ukungabikho kwezixhobo zoluntu kunye nokuthotywa: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	18 Matshi 2019	• 29 Comments
Ukuba ukuhlaselwa 'kweBrenton Harrison Tarrant' eKristuchurch eNew Zealand akuyona i-PsyOp, ngoko ngokuqinisekileyo isebenza kakhulu kwi-ajenda enkulu. Ukugxininisa imifanekiso esetyenziswayo yokusasaza, ephikisana ukuba inokunika abantu abaninzi imbono yokwenza ukuhlaselwa, i-alibi epheleleyo kwihlabathi jikelele ukuxhaswa kweendaba zoluntu ukuba ngumgangatho. Unokuzibuza ukuba ngubani obukele umjelo okholayo kangaka? Ngaba unkosikazi wayibhengeze kwiqela lakhe labahlobo be-Facebook? Akumangalisi ukuba abantu bafuna ukubona imifanekiso emva koko, kuba yintoni imidiya eyenzayo kwiminyaka xa ibonisa imifanekiso yeemfazwe okanye inkxwaleko? "Ukuhlaselwa" kwakukho isizathu esihle ulwaphulo-mthetho lwabantu ukungena. Ekugqibeleni kodwa kuncinci, igalelo elikhulu kwi-polarization phakathi kwabantu abashiya kunye nabakhonkolo, njengoko kuchazwe kuyo eli nqaku.
Sifaka isicatshulwa esimele sibeke isiseko soorhulumente wehlabathi. Urhulumente wehlabathi ulwela inkolo enye yehlabathi, enye yesini kunye nohlanga olulodwa. Oku kuya kwenziwa kwimiyalelo yakudala yaseRoma ethi 'Ordo ab Chao' (ukukhupha ngaphandle kweengxabano). Kule nto, inani labantu basemhlabeni kufuneka liqale liphumelele kwimfazwe yehlabathi yesithathu (ngokwemiqathango yeskripthi), apho iinjongo zonqulo zihlala khona. Iziprofeto zeenkolo ezinkulu zehlabathi zidlala indima ebalulekileyo kule nto. Emva kokuba imfazwe yeYerusalem iphelile, abantu basemhlabeni baza kubonakala bephelelwe amandla baze badibanise kwaye bavumelane nomyalelo omtsha we-UN we-Luciferian. Kule nqubo, ukuxhatshazwa kwenkolo kufuneka kuqala kucocwe. Uqikelelo lwam kukuba i-bloc yamaSilayam iya kuzuza amandla. Ndiyakholwa ukuba iTurkey iya kudlala indima ebalulekileyo kule ndawo ngokuvuselela uBukhosi base-Ottoman. Ngexesha elifanayo, siya kubona ukuphuma kwamandla e-US. Ndiza kuphinda ndichaze yonke inkqubo (iskripthi) kwakhona, ngoko ndikuthumela kuyo ukuze uthole iinkcukacha ezingaphezulu eli nqaku.
Nangona le ajenda enkulu iqhubeka neendudumo, ngoku sibona ukuba iwebhu jikelele (intanethi) ivala ngokugqithiseleyo nangaphezulu. Amanyathelo okunyanzeliswa kwamalungu amakhulu eendaba ezentlalo (i-Facebook, i-Google, njl. Njl.) Zenziwe ngokucacileyo nge-New Zealand "ukuhlaselwa" kwi-1. Akukho mntu onokuzikhusela kwaye ngenxa yokuba "ukuhlaselwa" okunjalo kwimpembelelo enkulu, siye sabona ubungqina bendlela "Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo'isebenza ngozuko olupheleleyo. Kwixesha elidlulileyo, abeendaba bavunyelwe ukubonisa imifanekiso yevidiyo yokubulawa kukaJohn F. Kennedy, ukuhlaselwa kwe-911 okanye ukubethelwa kwe-XNUMX, ngaphandle kokutsho ukuba oku kunokukhuthaza abanye. Nangona kunjalo, iindaba zoluntu ngoku zibiza ngaphandle komzabalazo okanye ilungelo lokunyanzeliswa kwezizwe zeNew Zealand. Imifanekiso ehamba ngendlela ingasiphakamisa umbuzo wokuba sijongana nenkohlakalo ejulile apha.
Isiteshi sam Vimeo sivaliwe phakathi kwemizuzwana embalwa yokubeka imifanekiso, ngelixa ngaphaya kwayo yonke into ndifuna ukubonisa indlela engummangaliso ngayo imifanekiso kunye nokuba zifana njani inkohliso enzulukuba awuboni nayiphi na igazi okanye impembelelo yeempembelelo ezindongeni. (funda ngaphezulu ..)
Kwaye emva kokuba le "hlaselo" wonke umntu ewele ukwesaba, ukudakumba okanye umsindo kunye nokugqithiswa kwemithetho, i-ajenda ye-transgenderization kunye ne-transhumanization iyaqhubela phambili. Nangona ukuphikisana phakathi kwamazwe afana ne-US, iRashiya, iTurkey, iChina kunye nokufana nokubonakala kubonakala, yonke le mazwe ngoku isebenza ngokuzisa iteknoloji engakwazi ukuzisa ubuntwaba ebukhosini bedijithali. Kungenxa yokuba onke amazwe alwela kwintsimi ebonakalayo akhonza i-ajenda efanayo emva kweemboniso. Olu lungiswa kwintsimi ebonakalayo luyimfuneko kuphela ukuba ukwazi ukugqiba i-master master script. Oku kuhlale kuyenziwa kumzabalazo phakathi kwamaqela aphucukileyo kunye nomendo wesiprofeto sokwenyaniso, kuba ezi ziyingxenye yeso script script. Injongo ephezulu, nangona kunjalo, kukuzisa abantu phantsi kolawulo lukaLuciferi. Umntu kufuneka uqhagamshelwe kwi-intanethi ngengqondo kunye nomzimba ukwenzela ukuba ekugqibeleni uphumelele ubuninzi. Ubungakanani bomesiya obulindelekileyo ukusuka kwiinkonzo mhlawumbi kuza kuvela 'efwini' (cinga ngeNdalo engathandabuzekiyo, yabona apha en apha ngaphezulu).
Ndiyaqonda ukuba konke oku kunokuzwakala ngathi i-abracadabra kuwe, kodwa kubalulekile ukuba ufunde le ngcamango kuba oko yiyo yonke into enkampani yezobuchwepheshe (abaye bathabatha lo mqathango wokugqibela wokucandwa). Bazama ukuthungulwa kwabantu kunye nobuninzi. "UYintoni Transhumanization? Ubuninzi?Ndiva ucinga. Ewe, ukudluliselwa kunye nobuninzi. Kubalulekile ukuqaphela eli sigama. Ukunyuswa kwezombusazwe kulandela ukulandelwa kweenkcukacha zezenkolo ekuqhubeni ukulwa kwiJerusalem, kodwa nokuphunyezwa kwemithetho eyenza i-transhumanization kunye ne-transgenderization. Ukudalwa kweenethiwekhi ze-5G; ukufaka iDNA yolwazi; ukuqaliswa komthetho wokugonywa komthetho; ukunyusa umthetho we-transgender; bonke babenegalelo kwi-ajenda ngqo (jonga apha en apha). Ngoko ke bonke bafanele bawubize ngokuthi 'i-master script', njengoko ndidla ngokuba kubiza. Ngoko ke ndincoma eli nqaku uyifunde ngokugqibeleleyo, ukuze ukwazi ukubona ngomfanekiso omkhulu. Thatha ingxaki yokufunda amanqaku phantsi kweenkontila eziluhlaza ukuze i-master script ibonakale kuwe.
Ukuba kuphela sinokugqiba ukuba abantu abaninzi nabaninzi baqonda ukuba ihlabathi lonke ngeendaba eziphathekayo Ngaphandle ibanjwe ngokwenene, apho iindawo ezidlulayo zidlalwa ngamacandelo okuhlaselwa ngamacandelo amaqela. Emva koko inkqubo inokuyeka. Ukuphulwa komthetho yinkqubo enqwenelekayo yokudala iingxabano. Emva kokuba kukho i-chaos, umnxeba wokungenelela 'ngengalo enamandla' ivela ngokuzenzekelayo. Kuphela xa abantu beqala ukubona ukuba izinto ziye zenziwa ziyakuthintela ukukhishwa kwesikhokelo kwaye isicatshulwa sichaphazelekayo.
tags: hlaselwa, Brenton, ukunyanzelisa, christchurch, ulawulo, Facebook, eziziimbalasane, Umpu, Harrison, phila, eendaba, entsha, kutyumba, zentlalo, stream, I-Tarrant, loyiko, ukuhlasela koogorha, yokuzonwabisa, emanzi, mithetho, youtube, Zeeland
18 Matshi 2019 kwi-05: 42
Asimele sikhohlwe ukuba siphila ngexesha elifanayo noNowa. Uninzi luhlala lucocekile kwi-DNA, ubuncinci asiyixutywanga kunye nobugcisa. Unokungcola oko ufuna ukukhukula kodwa abaninzi abantu baqhubeka behleka.
Abantu apha eNew Zealand baphendule kakuhle, abazange bagxininise ububi kwaye bacacise ukuba asinjalo. Ngakolunye uhlangothi, akukho nto iboniswa kwiindaba malunga namaKristu abulawa eAfrika okanye ukuba u-Israyeli uyabatshabalalisa amaPalestina.
Izikolo zixelelwe ukuba zingabelane ngefilimu kuba zibuhlungu kakhulu okanye kuba kungcono ukuba ungayithobeli umenzi wobubi. Akuxelelwa ukuba ungadlala ifowuni okanye umsebenzi okanye iiveki ezimbini. Akunatsholwa ukuba uchungechunge lwezobudlova kwi-Nedflix alulungele kakuhle ingqondo. Ewe kodwa oko akutshoyo ngoko ke, ewe namhlanje siyazi kakuhle into eyinyani kunye nenkohliso.
Ukongezelela, kusenokwenzeka ukuba ixesha apha eNew Zealand (ukuwa) ixesha lokuvuna. Abantu bazive bexinezelekile kakhulu emva kweveki-moya, unokujonga ubungakanani bamandla obu benzileyo, bobabini obuhle kunye nabangalunganga. Ezilishumi elinanye (amanqanaba aphantsi kakhulu) ziyaqhubeka zikhona ngenxa yazo zonke iimvakalelo zempindezelo eziye zaveliswa. Ngethuba nje ezi zondliwa, ihlabathi liqhubeka lijikeleza kwilizwe njengoko lithetha ngoku.
Kukhona isigqubuthelo phezu komama womhlaba, ngoko ke abafazi kulo mhlaba bahamba bejikeleza, akukho mmahluko phakathi kweenkolo.
Nangona kunjalo silapha ngexesha apho iingubo ziqala ukuqhawula kwaye ndiqala ukuqaphela ngokuphindaphindiweyo ukuba amaxesha aya kutshintsha. Yingakho yonke into ihamba ngokukhawuleza kuba ixesha lehlabathi elidala liphela.
Ndiyathanda ukuba banelisekile ngehlabathi elitsha ledijithali, ndiyazi apho iinqanawa okanye ityeya iyaxhomekeka. Yingakho ndicinga ukuba ulungile ngeTurkey!
Andiyithathi nxaxheba, ndiza nje ukugcina 😎
18 Matshi 2019 kwi-07: 25
Ngamahlobo angamaKristu ndafumana iingxelo zokuhlaselwa eNigeria naseYiputa. Ukuba yinyani, amaxhoba amaninzi kunamaNZ. Ndingazange ndiyibone kwiindaba, mhlawumbi iphoso lam.
Iinkwenkwezi ziya kunika imali ye-NZ;
Bayazibuza ukuba baya kunika imali kwiNigeria naseYiputa.
18 Matshi 2019 kwi-08: 20
Ok, ndiyazi ukuba ngumngcwabo kwaye uMartin akavuyi.
Kodwa eli lizwe lekhoboka alisekho kakuhle. Baye besesitratweni namhlanje esingazange siphendule imizuzu ye-66 !! Ukwaziswa malunga nalo kuthatha ixesha elide. Ziyintoni imizuzu ye-66 ngoku? 'Njengemanyano', wenza isilumko ngokwakho kwi-regime. Imanyano yamanyano ifuna ipenshini 'entle'. Ncokola kwaye akucacile oko ngoku 'kukuhle'. Misela nje iimfuno ezinzima uze uhambe. Ukuba kuyimfuneko, nqama i-2 ngeenyanga ngexesha. Kodwa ewe amakhoboka akalindi. Ziqhuba. I-Netherlands inomlomo omkhulu phezu kwamanye amazwe. Ewe, ingaba yintoni enye, kuba kukho abantu abahlala behlala, abaqhelanisiweyo, abahlali abanobutsha, abaphethe i-service, babambe izikhundla eziphambili.
18 Matshi 2019 kwi-11: 26
Kusenokuba ixesha lokuba ulungelelanise i-mantra 'yenguqu yombuso' emva kokuba ufunde i-master script. Emva koko uza kufumanisa ukuba utshintsho lwenkqubo luyakwenziwa kuphela ngemiphefumlo evuselelayo kwaye ngoko kuyimfuneko ukuchazela abantu abaninzi ngangokunokwenzeka ukuba umdlalo udlalwa njani. Awukwazi ukufika apho kunye neenguqu zepolitiki kuphela.
18 Matshi 2019 kwi-12: 04
Ndiyabulela uMartin. Isikripthi somphathi sabantu abasesikweni abasesikweni sisekelwe ekubeni namandla kunye nokufumana amandla amaninzi ngokulahla inani labantu jikelele. Benza kwaye banokwenza oku kuba banegunya kwezopolitiko, abeendaba, njl. Ngoko ke ziindawo eziphambili kwaye aziyi kuzinikela ngokuzithandela. Yingakho baphatha yonke into. Ukuba ufuna ukwenza oku kwenzeke, kwimbono yam ngokuthobekileyo akunakwenzeka ngokuziqonda. Bahleka nje ngaloo nto. Ukongezelela, udla ngokubona ukuba inkcaso elawulwayo yamukele igama elithi 'ukuqaphela'. Uhlakaniphile kakhulu, ngendlela. Ekugqibeleni, malunga nezenzo, awukwazi ukuwukhupha umqobo ngokuziqonda .. ukuqonda okanye ukuxhaphaza kunengqiqo kuphela ukuba unamandla kwaye yiloo nto abasesikweni abasolisayo kwaye basebenzise 'ukuqonda, ukuzisa uluntu kwimimiselo yabo eqhelekileyo ukulungiswa. Ngaba siyavuma ukungavumelani?
18 Matshi 2019 kwi-12: 59
Siyakwazi kodwa ndicinga ukuba isenzo siya kuza ngokuqinisekileyo ukuba uyazi ngubani olawulayo bakho (umphefumlo wakho). Uza kunqanda iskripthi kwaye ungabe usadlala umdlalo (ukulinganisa) ngokwemiqathango. Ngokomzekelo, oku kukhokelela ekuchitheni inkolo, iiparadigms ezisekhohlo kunye neendlela ezifanelekileyo, okanye ngokwemigangatho ekhonkco, ukuba ungaphinda wenze imisebenzi ngaphakathi kwenkqubo (njengomsebenzi). Oku kufuneka kwenzeke ngobuninzi, kodwa kumgangatho womphefumlo singakwazi ukurhoxisa izinto / izinto ze-hack (ukusuka kwisiseko sokuqala apho umphefumlo ukhona khona)
18 Matshi 2019 kwi-13: 01
Ukuba igama elithi "ukuqaphela" lichithwe ngenye imithombo yeendaba, ndivumelana nawe.
18 Matshi 2019 kwi-11: 19
Siyabonga ngeendawo okanye ukubeka izimvo zesihloko.
Nceda kwenzekani ngoku. I-Tarrant iboniswe ngathi
limela iqela elithile. Oku kwenziwa ngenyameko ngabantu abaqhelekileyo abasolisayo, abanobutshabalala, ukuba bahlule kwaye bangabandakanyi iqela elithile kunye naye kwaye banako ukufumana umgaqo-nkqubo wesigxina. Ukongezelela, abahlali abanobutsha abaqondi kakuhle ukuba i-Tarrant ayikhethiweyo okanye iqeshwe ukuba imele iqela elithile. Ukuba u-Tarrant wayenokwenza okuthile, wayeza kumela yena kwaye akukho mntu.
18 Matshi 2019 kwi-11: 28
funda eli nqaku kwakhona kuloo mongo:
18 Matshi 2019 kwi-13: 45
Enyanisweni, konke kulula.
Iimveliso zisoloko zisetyenzisiwe kwisicelo sezixhobo kwaye ngoko zisetyenziselwa ukunqunyulwa kwalawo mlawuli ocinga ukuba kufuneka zikhutshwe.
Kwakuyimithi, isibhamu, isinyithi, iitanks, iinqwelo, izixhobo zenuzi, kodwa ke ...... ..
Ukuncitshiswa ngefakenews, ukudluliselwa kwemali ngokukhawuleza, ukwehla kwangasese, ukunyaniseka kwekhamera yomzalwana omkhulu, ukuhlaselwa kobugwenxa bamaphekula, ngokukhawuleza ukukhawuleza inkululeko.
UGeorge Orwell wayengenakukucinga oku. Le yi 1984 kodwa amaxesha e-1000 awona mbi.
I-intanethi isipho kubapolitiki bethu abonakele / kubhanki kunye nakwamanye amazwe.
Kwaye ummi we-idiot akaziboneli yena ngokwakhe, uya kuphelisa isimo sezulu.
Akukho nto inceda ekuchaseni le nto kwakhona.
Yiba luhle kwintsapho, ngabahlobo kunye nabathandekayo kwaye uThixo makanike isisombululo
20 Matshi 2019 kwi-00: 38
Uqeqeshwe yiNkonzo ye-Intelligence Secretariat yakwa-ISraeli ..
Sinomfana osemnye, uneminyaka eyi-28 ubudala, umqeqeshi womzimba kunye neetoni zemali ezuzwe njengefa, ohamba ngehlabathi, efotozisayo yonke into, ethandwa ngumntu wonke, kwaye ngokucacileyo uyahamba ngokuzibulala.
Okwenene esinako ubulali oqeqeshiwe, iminyaka eyi-42 ubudala, evela kwintsapho yamaYuda, eyaqeqeshwa ngokumelene namaPalestina kwaye yakhonza eSouth Siriya nase-Idlib kunye ne-al Qaeda, ihamba kunye nephuma eTurkey.
Abafazi be-4 "abavakhenkethi" basincedwa "ukuphathwa kunye neendawo zokusebenza" kunye namapolisa asekuhlaleni amagosa obundlobongela awanikezela ibhotile.
Ngethuba lakhe ihlabathi lihamba "njengendoda enesantya," asinayo imidiya yoluntu. Asinayo iifoto zesikolo, akukho mlando wengqesho, akukho mfundo, akukho mlando wezemisebenzi, omnye "umntu ongenanto" onjengeSandy Hook "shooter" kunye nabanye abaninzi.
Ngeli xesha wenza impazamo yokuwela kwiindawo ezibukelwe yiNgqungquthela yaseRussia neSiriya, apho i-VT ifumana iinkcazo zemihla ngemihla. Bayazi, emva koko, kwakufuneka abe nguMongameli Assad. Awu? I-CNN yahluleka ukukhankanya oko?
20 Matshi 2019 kwi-08: 15
Ingxaki nge-VT isoloko icinga ukuba ithatha iNgqobhoko engamanga endaweni yokuxhamla, ingcinga yam.
20 Matshi 2019 kwi-08: 21
Ukuba kukho amaxhoba okwenene, izihlobo eziseleyo (ngokuqhelekileyo oomama) ziya kufuna idwala eliphantsi. Nangona kuthatha iminyaka.
20 Matshi 2019 kwi-10: 25
Ngokuqinisekileyo mb, yinto engundoqo, oomama ngokwenene (obawo nabo) baya kusebenzisa zonke iindlela zokufumana, abayi kuvumela ukuba usuku luhambe ngaphandle kokuphazamisa abaphathi njll. Yiloo nto.
Ngokuxhamla, abalingisi bacelwa ukuba bakhankanywe kwiTV nakwi-radiyo kuphela, kwaye kubonakala ngathi uluntu jikelele ukuba amalungu omndeni ahlaselwa. Abeendaba banegunya
Ngeflegi yobuxoki Akukho nto inokuqikelelwa kwaye izinto eziphambukayo zinokuthi zenzeke kwiintsapho xa kwenzeka ukuxhamla, 'zinakho konke' ezandleni zabo, zininzi ezithembekileyo
20 Matshi 2019 kwi-10: 04
U-Erdogan, 'uMninimsi-Muslim', naye udlala umdlalo nabazalwana bakhe baseYurophu eNtshonalanga ngokuvakalisa ukwesongela. Ngendlela, ngaba wakha ode kumaphephancwadi i-Time? Bonke abadlali basebenzisa isicatshulwa esifanayo esenza into ethile xa abantu abasolwayo banika imvume. Silawulwa ngabantu abathandekayo, abangaphandle, kwaye oku kwenzeka emhlabeni jikelele. Bafihla oku kusuka kubemi abaqhelekileyo. Oku kusebenza nakubantu abaqhelekileyo baseTurkey. Inkolo njengendlela yokucinezela.
21 Matshi 2019 kwi-13: 01
@salm, ndicinga ukuba i-VT icatshulwa inyaniso ... IChristchurch iyindawo eyaziwayo yaseMosad
Mossad i-spy ring 'yafunyanwa ngenxa yenyikima kaKristuchurch'
Inkonzo yamfihlo yase-Israel uMosad utyholwa okanye uqhuba ukuqhutyelwa kwintelligence eNew Zealand eye yavulwa ngenxa yenyikima ye-Christchurch kaFebhuwari.
Kuyamangalisa ukubona ukuba igama le-mossad liyaqhubeka liwela phakathi kwazo zonke iintlobo zemisebenzi yeflegi yeeflegi cinga ngokusasazwa kwe-FOX nje emva kwe-9 / 11 malunga ne-Amdocs, i-Comverse njl
Kwakhona isiganeko, ngokuphindaphindiweyo ngokuphindaphindiweyo, kathathu umzekelo.
20 Matshi 2019 kwi-08: 16
Baphinde baphonsa amazwana ukuba abavumelani nawe.
20 Matshi 2019 kwi-09: 25
Ndiyayiqonda ngeendaba ukuba enye i-Tarrant ivalelwe eNew Zealand ngokuhlaselwa. Ndakuqonda nokuba akukho sithombe sinyatheliswa ngelixa sinyaniswe ??? Ukufakela amanqaku ombuzo. Akunakukhutshwa ngaphandle kokuba idilesi ibanjwe entolongweni okanye yenza ukuba i-Tarrant iselwandle kunye ne-cocktail enhle esandleni sakhe. Emva koko ufumana ubume obutsha kwaye uyaqhubeka. Ukuhamba ngehlabathi.
20 Matshi 2019 kwi-09: 35
Ngamavidiyo angcolileyo ungayenza abantu abangabikho
20 Matshi 2019 kwi-09: 51
Eqinisile, wakwenza kucacile kwisayithi lakho. Ividiyo 'yasekuqaleni' yeTarrant ayinakuboniswa eNew Zealand, ityala. Baqala ukwenza yonke into engummori kwimemori. Ngokungaqinisekiyo malunga 'neenyaniso' akunakwenziwa. Simele sikholwe "inyaniso." Nje inkolo.
20 Matshi 2019 kwi-10: 54
Basebenzisana nomzimba kabini, iifayile zobungqina, njl. Ihlabathi leengqondo, ngoko-ke amavidiyo angabonakaliyo, amasu ekhutshulwa okomhlaza sibona isib. Kodwa yintoni ecacileyo kukuba intlangano yeZiyon ngaphakathi kwehlabathi leengqondi liye lalinika phambili ukuba isebenzise ukwahlula kunye nokulawula, ngokukhethekileyo phakathi kombutho wamaSulumane kunye neZiyonism, kubandakanywa namaKristu angamavangeli. Indawo yeChurchchurch ixelela ..
20 Matshi 2019 kwi-05: 28
Iingxelo ezininzi ukuba abantu bafumana iintlawulo zezithuba kwi-Facebook kunye nobudlelwane ekuhlaselweni.
Akukho lwabiwo luvunyelwe ukwenzela ukuba ungayithobeli umenzi wobubi. Iintlawulo, izigwebo zentolongo kunye nokunye okunjalo kunokunikezelwa ukukhonza i-ajenda enkulu.
Inene ayinanto yokwenza kunye nomnye. Batshatyalaliswa ngokwenene abantu abenza ibanga elilodwa abenza oku 👽
20 Matshi 2019 kwi-08: 09
Umyalezo wokuqala womngcwabo uNZ, eli nqaku likhuluma nge30 eyalimala (?).
"Ukubulawa kobuhlanga okwakushukunyiswa ngokobuhlanga kuLwesihlanu odlulileyo kwindleko zabantu be-50 kude kube ngoku. Abanye abantu be-30 balimala. Ummangalelwa-umdlali osisigxina oneminyaka eyi-28 ovela e-Australia - uvalelwe ukuvalelwa kwecala. "
20 Matshi 2019 kwi-14: 35
Kuye kwandipha intsholongwane yokuba ukudubula kwavela "njengenkohliso" okanye "inkohliso", oko kufanele ukuba yintoni isizathu sokuba bawa ngengozi ngebhasikidi. Uphando lwesibili lwe-1 enkulu ye-New Zealand, uyabuya, kwaye uya ejele xa ubelana ngemifanekiso?
jonga i-YT ifilimu ngeenkcazo emva kokuba izimvo ...
UBill Wagner1 ngosuku oludlulileyo
Ngokungaqinisekanga oku yi-psyop. Ixesha lokuvalela ukusabalalisa okanye umgca ngumpu wokutshaya.
Jonga izimpendulo ze-16
chad calderone1 ngosuku oludlulileyo
UDevin Nunez uye wakhawula ama-$$$ amacala okuqala w / Twitter.
kwimihla yohlobo lwe7771 edlulileyo
Isizathu sokuba basongela abantu ukuba ngaba babanjwe kwaye konke oku bakwenzayo.
20 Matshi 2019 kwi-15: 58
+ imithetho yeempahla abaye bahamba ngayo ngesivinini sombane ... ngamanye amazwi, babenayo kwiishefu rhoqo, kwakungekho kuphela ukulinda iflegi yefake.
20 Matshi 2019 kwi-15: 55
Ewe, i-ping-pong phakathi kwe-Freemasonry isiqalile kwaye i-bastards iyakwazi ukubukela indlela yonke into ehlaselwa ngayo ukuya kwiindawo eziphakamileyo, okanye njengokuba uKanis wayenokuthi okanye kufuneka ndithi uTanis 😀 "Wandula ke ungqongqo"
Kwaye sibona i-Istanbul ngaphezulu kwinqanaba lesigaba ... leyo yayiyinjongo
20 Matshi 2019 kwi-18: 26
Ngaba u-Erdogan uya kugqitywa ukuba afumane isikhokelo njengalumekazi uAdolf ngenxa yeenkonzo ezinikezelwa kwiindawo eziqhelekileyo?
Okanye ngaba ndihamba phambili kwimikhosi.
Ukunyamezela Sun siya kuwubona.
21 Matshi 2019 kwi-07: 38
Ngaba uyifumana le nto ukuba uyakhathazeka ukwenza ???
21 Matshi 2019 kwi-17: 34
Ingaba indoda iphethe ibhotile yegazi? Yintoni enye enokuba nayo. Zigwebe
« Ngaba i-Brenton Harrison Tarrant ihlasela ukuqaliswa kwesigebengu se-anti-Turkey?
Ukuhlasela kobuphekula 24 Oktoberplein e-Utrecht, ukwethusa lonke ilizwe! »
Iindwendwe ezipheleleyo: 11.689.003